अन्तर्वार्ता Archives - Hotpati
सुरज लम्साल रयाप गायक हुन तर आज भोली गायन भन्दा योगा र त्रिभुजिय शिक्षामा व्यस्त रहेका छन् । शिक्षा क्षेत्रलाई फरक ढंगले नियाल्दै आएका लम्साल पथिक त्रिभुजिय शिक्षा सेन्टरका अध्यक्ष हुन् । पथिक त्रिभुजिय शिक्षा सेन्टर आचार्य श्री पथिकद्धारा प्रतिपादित शिक्षा हो । त्रिभुजिय शिक्षामा आधारित रहेर मानिसका तीन मस्तिष्ककाफुर्सदमा
सम्वाददाता प्रकाशीत मिति: 12 महिना पहिले
लाखौं युवाहरु विदेशिएपछि उतैंतिरको सुखसुविधा र रमाईलोमा भुल्छन्,पलायन हुन्छन् । थोरैं व्यक्तिमात्र ती सब कुरा भुलेर आफनो देशमा संघर्ष गर्ने प्रण गर्दछन् ।तीमध्येका एक युवा हुन् सन्तोष नेपाली (भुसाल) ५ बर्षसम्म ईपिएसमार्फत कोरियामा रोजगारी गरेर फिरेका सन्तोषले नेपालमैं केही गर्ने सोच बनाएर कुखुरा पालनको तयारी गर्दागर्दै दाई कुमारले ट्राभल एजेन्सीमा लगानीफुर्सदमा
सन् २००८ मा नेपाल सरकार र दक्षिण कोरिया सरकार बिच सम्झौता भएर ईपिएस प्रणाली लागु गरिएको हो । थोरै लगानीमा राम्रो कमाई हुने हुदा नेपाली युवा माझ कोरिया निकै आकर्षक गन्तब्यको रुपमा परिचित छ । उसो त पछिल्लो तथ्यांक अनुसार कोरियामा औधोगिक दुर्घटना परेर र आत्महत्या गरेर ज्यान गुमाउनेको संख्याफुर्सदमा
योग कस्तो व्यायाम हो ? योगजस्तो उत्कृष्ट व्यायाम अरु कुनै छैन । योगले शरीरका साथै मनलाई समेत सुधार्ने काम गर्छ । कसैले योग गर्छ भने ऊ कुनै पनि रोगबाट मुक्त हुनसक्छ । योगले शरीरलाई कसरी फाइदा पुर्‍याउँछ ? शरीरमा रोग मुख्यतया मानसिक कारणले सिर्जना हुन्छ । अहिले हामीले खाइरहेकोफुर्सदमा
शत्रुगते फिल्मको छायाङ्कन सकेर हरिवंश आचार्य पारिवारिक भ्रमणका क्रममा विभिन्न शहरहरुमा निस्किएका छन्। मंगलबार उनको परिवारले पाल्पाको तानसेन स्थीत होराईजन होम स्टेमा रात बितायो। सोही अवसरमा हास्य कलाकार हरिवंशसँग आचार्यसँग देशको समसामयिक परिस्थितिमा रहेर मुक्तिप्रसाद न्यौपानेले गरेको कुराकानी। आजकाल के गर्दै हुनुहुन्छ ? मह सञ्चारले अहिले हामी ‘शत्रु गते’फुर्सदमा
विश्वकप छनोटमा स्थान बनाउन सफल भयौं । फाइनलमा चुक्यो । समग्रमा कस्तो रह्यो डिभिजन टू ? नेपाली क्रिकेटलाई माया गर्ने सबैले पछिल्लो एक सातालाई याद गर्नेछन् । खेलाडीका रुपमा हामीले राम्रो क्रिकेट खेल्यौं । पहिलेदेखि भन्दै आएको थिए कि हाम्रा खेलाडीहरुमा क्षमता छ । यो पटक टिम स्पिरिट पनि राम्रोफुर्सदमा
मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २९ प्रतिशतबराबर योगदान रेमिट्यान्सको छ । तर, पछिल्लोपटक रेमिट्यान्स घट्दै गएको तथ्यांक आउन थालेको छ । रेमिट्यान्सको योगदान, हुन्डीको कारोबारले वैधानिक माध्यमलाई पुर्‍याएको असर र रेमिट्यान्स घट्नुको कारणबारे हिमाल रेमिट हेर्ने हिमालयन बैंकका निमित्त महाप्रबन्धक उज्जल राजभण्डारीसाग गरेको कुराकानी : राष्ट्र बैंकदेखि विभिन्न निकायले रेमिट्यान्स घट्नेफुर्सदमा
कोरियामा बिदेशी कामदारको इतिहास सन् १९८७ बाट शुरु भएको मानिन्छ । यो बर्ष गाङनाम क्षेत्रका केहि सम्भ्रान्त परिवारले फिलिपिन्सबाट कामदर झिकाएर घरेलु काम लगाएका थिए । सम्पन्न परिवार बसोबास गर्ने क्षेत्र मानिएको गाङनाम घरेलु कामदार राख्ने एउटा प्रतिष्ठा जस्तै बनेको थियो तर यो प्रथा लामो समयसम्म चलेन । बरु औद्योगीकफुर्सदमा
दुर्गामान तामाङ ईपिएस रोजगार प्रणाली अन्र्तगत सन २०१२ मा कोरिया प्रवेश गरे । हाल छल्लाबोक्दो मुजु स्थित संगहान भन्ने ठांउमा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा काम गर्दैं आएका उनले नेपालमैं ब्ल्याक बेल्ट फस्ट डान हासिल गरे । तामांगले तेक्वान्दोप्रतिको तिव्र ईच्छा र चाहनाले गर्दा कोरियाको १२ घण्टा काम गरेर भए पनि राती ९फुर्सदमा
कोरियामा के उल्टो देख्नुभयो?उनिहरुलाई सुल्टो लाग्ने हामिलाई उल्टो लाग्ने के के हुन?केहि जान्न चाहानहुन्छ?रहनसहन रीतिथिती मात्र होइन केहि प्रतिज्ञा समेत उल्टा छन।मैले मात्रै देखेको हैन ।धेरैले देखेका छन तर थोरैले मात्र लेखेका छन।तिनै थोरै मध्यको एक हुॅला तेसैले लेख्ने जमर्को गरेको छु।यो टोनि ब्लेयर ,भ्लादमिर पुटिन बाराक ओवामाका रहस्यमय कथाफुर्सदमा